Mpitsoa-ponenana · Aogositra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Mpitsoa-ponenana · Aogositra, 2012
Tantara mikasika ny Mpitsoa-ponenana tamin'ny Aogositra, 2012
Kamerona: Ireo Antony Nandosiran'ny Atleta Tany Amin'ny JO Tao Londona
Afrika Mainty18 Aogositra 2012
Ireo fandosiran'ny atleta fito amin'ny 33 nandrafitra ny delegasiona Kamerone, no lasa nalaza teo amin'ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena. Ireo mpampahalala vaovao sy Kamerone bilaogera maro dia nitanisa ny antony ara-toe-karena ho toy ny antony fototra nanosika ireny fandosirana ireny.
Libanona: Fifantohan-tsaina Ho Amin'ireo Olona Tsy Hita Sy Nalaina An-keriny
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana11 Aogositra 2012
Ireo fakàna an-keriny tato ho ato, natao hatramin'ny nipoahan'ny Revolisiona Syriana dia nampimpongatra indray ny horohoro tsy miato sy nisarika indray ny saina ho amin'ny olan'ireo olona nanjavona tao Libanona.
Syria: Fitsabahana Ara-tafika Sa Ady An-trano?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana09 Aogositra 2012
After the International Committee of the Red Cross announcement that it considers the conflict in Syria to be a full-blown civil war, Western media sites and bloggers launched a debate revealing the secrets of politics and war benefits of the global powers who are looking for their influence in the...
Mitady Fialofana any Jordania Ireo Syriana An'arivony
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Aogositra 2012
Mitarika ireo Syriana handao ny fireneny ny toe-draharaha ankehitriny ao Syria, ka maro ireo lasa namonjy ny firenena mpifanolo-bodirindrina, Jordania. Nanambara ny loharanom-baovao avy amin'ny governemanta jordaniana fa efa miomana amin'izay mety ho fahatongavan'ireo mpitsoam-ponenena syriana an'arivony ny manampahefana. Nanome alalana an'i ONU hanangana toby fialofana miisa 22 ao avaratr'i Jordania ny governemanta...